Indlela Yokufaka Okubhekayo Nokulinganisa Ngezithombe Ze-Cast
Isofthiwe Umklami we-graphic
Yakha i-Cast Cast Shadow
by UJacci Howard Bear
Engeza Ukubheka Ngezithombe Ze-Cast
Izithunzi ezifakiwe zengeza inzalo nobukhulu ngenkathi zihlanganisa into emhlabathini. © J. Bear
Njengemithunzi yokudonsa, ukuphonswa noma ukuthunjwa kwamatshe kufaka isithakazelo ezintweni ezisekhasini. Basebenza ukusekela izinto ezisekhasini, izingxenye zomkhiqizo wokwakheka ndawonye, ​​futhi wengeze ukuthintwa kwezinto zangempela - ngisho nalapho zisetshenziselwa izinto ezingenangqondo kanye nobuciko bokunamathisela.
Izithunzi zokusika zakha uma into evimba umthombo okhanyayo. Ukuma kwento kukhonjiswe kwifomu lesithunzi ngaphesheya kwezinto ezibhekene nomthombo wokukhanya. Ngokuvamile okuyinkimbinkimbi kakhulu ukudala kunezithunzi ezidonsa phansi, izithunzi zisaqhubeka zindlela elula yokuthuthukisa umbhalo kanye nehluzo emakhasini wekhasi futhi unikeze ukubonakala kwamathathu ephepheni eliphathekayo.
Ama-Cast Cast Shadows on Source Imagination Light
Izithunzi ezinde kakhulu zivame ukukhanya ngokugqamile ngenkathi imithunzi emifushane noma indawo esiseduzane nento ebeka isithunzi iba yinto emnyama. © J. Bear
Ngaphandle kokuba udale ngobuqotho izwe eliyingqayizivele eliphula imithetho yokukhanya nethunzi, lahla izithunzi zakho usebenzisa umthombo okhanyayo ongokoqobo ongokoqobo oncike ekuqinisweni.
Yenza isithunzi sakho ngokubhekene nomthombo wokukhanya. Imithombo ekhanyayo ekhanyisa cishe evela phezulu ngenhla ithambekele ekudaleni izithunzi ezimfushane. Ukukhanyisa okuningi ohlangothini lwezinto kwenza izithunzi ezinde. Igoli elikhanyayo lenza isithunzi esikhulume kakhulu ngenkathi ukukhanya okuphansi noma ukukhanya okungafani kubangela izithunzi ezithambile.
Dala ama-Shadows we-Cast Quick & Easy
Ama-shadow shade alula asemnyama noma aphuzi, okungafani okuphambene okuphindaphindiwe kwento ephuma kwento ebonakalayo ebusweni obonakalayo noma obungabonakali. © J. Bear
Isithunzi esithunyelwe esilula:
Yenza impinda yento.
Phenduka, skew, welula iphindwe ngokuphambene nesiqondiso somthombo wokukhanya ocabanga.
Gcwalisa impinda enomnyama noma empunga.
Sebenzisa i-blur encane (i-Blur Gaussian isebenza kahle).
Isithunzi sangempela esithunjwa sivame ukuba sibe mnyama futhi sibukhali kakhulu esiseduze nento. Ngaphezu kwalokho, ukukhanya okuncane kuvinjelwe ngakho isithunzi siba lula, sishaye. Isithunzi esingokoqobo singenzeka ngokusebenzisa i-gradient igcwalise noma ifaka kusuka ebumnyameni kuya ekukhanyeni bese ukhetha ngokucacile isithunzi - ukufiphaza okungaphezulu okuvela entweni ebeka isithunzi, ukufiphaza okuncane eduze nento.
Izintambo Zokukhonjiswa Kwendawo
Donsa isithunzi (phezulu ngakwesobunxele) ushiya isibani sodonga esintantayo. Izithunzi zokusika zigcina isibani ziboshwe odongeni. © J. Bear
Isithunzi sokudonsa sinikeza inkolelo yokuthi into iyahamba phambi noma ngaphezu kwendawo. Isithunzi sokudonsa ekukhanyeni (ngakwesokunxele kwesokunxele) asisize ukuqinisa ukukhanya odongeni (okubonakalayo noma engabonakali).
Ngomthunzi othunjiwe, isithunzi sihlala sinamathele phansi kwesibani ngenkathi zonke ezinye izibhamu zethunzi zisuka ebangeni futhi zingena odongeni. Isithunzi senza isithombe se-flat sibheke ezintathu-ntathu kepha hhayi nje sifinyelele esikhala. Izithombe ezingezansi ngakwesokudla nezansi ezimbili zibonisa nje ezinye zezimo ezikhona ezifakiwe ezibandakanya ukuqina nokuqina, emaphethelweni aqinile futhi athambile.
Yenza ama-Cast Shadows Ingxenye yangemuva
Vumela ukuthungwa nombala wesizinda kuboniswe ngethunzi. © J. Bear
Izithunzi zangempela zingase zibe mnyama ngemuva kodwa azikufihli. Sebenzisa obala ukuze uvumele imibala yangemuva nokuthungiswa kubonise.
Lapho isithunzi esithintekayo sishaya izindawo eziningi, njengomhlabathi nodonga, shintsha indawo yesithunzi ukuze ilingane nalezi zindawo ezihlukahlukene. Kungadingeka ukwakha izithunzi eziningi ezisebenzisayo bese usebenzisa kuphela isabelo esidingekayo emgqeni ngamunye.
Hlanganisa ama-Shad Cast Shadows Ngezifomu Zefomu
Qaphela indlela ohlangothini oluthile lomthunzi olumnyama olumnyama, oluthunjwa uma kuqhathaniswa nohlangothi olubhekiswe kumthombo wokukhanya. © J. Bear
Uma into idonsa isithunzi, uhlangothi oluvela ekukhanyeni luyoba nesithunzi. Lezi zithunzi zihamba kancane, ngokuvamile zichazwe kakhulu kunezithunzi ezifakiwe. Uma uthatha umuntu noma into ethile esivela esithombeni sayo sokuqala ukuze ubeke endaweni, qaphela izithunzi futhi ukhanyise isibalo. Uma ngabe umthunzi othungayo awunakuthola ukuthungatha okukhona kulesi sibalo, kungase kudingeke ukuthi usebenzise izilawuli zokukhanya ukuze ukhethe izingxenye zalesi sibalo ukuvuselela izithunzi zefomu ezifanisa nomthombo wakho omusha wokucabanga.
Indlela Yokudala I-Grafitti-Style Art Urban In Photoshop
Amafomu we-Border Circular Free for Photoshop and Elements
Ama-Watermark Ama ifotho kanjani ku-Photoshop Elements
Funda ngamafomethi wefayela yamaNative
Indlela Yokulungisa Ukuphazamiseka Kwendlela Yomfanekiso Ngayo I-GIMP
Indlela yokwengeza ulwazi lokuxhumana ku-IOS Lock Screen Screen yakho
Funda Ngemibala Ehlukahlukene Yosuku LukaSt. Patrick
Ungeza kanjani i-Snow Snow ku-Photo ku-Paint.NET
I-Orb Audio I-People's Choice Home Ukubukwa Kwesimiso Sokubukwa Komlomo Somlomo
I-Acorn 5: I-Tom's Mac Software Pick
Abafaki bemikhiqizo nabakwa-Home Theater Installers
Indlela yokusebenzisa i-iTunes njenge-Radio Player ye-Intanethi
Sebenzisa Izithombe ze-OS X Ngezincwadi Zama-Multiple Photo
8 I-Great Christmas Shopping List Izinhlelo zokusebenza ze-iPhone ne-Android
Izifinyezo ze-SMS ezivamile
Yini i-BlackBerry Enterprise Server Do?
Buyisela i-Outlook Ifonibhuku namafayela Emails
Yiziphi izilungiselelo ze-SMTP ezisheshayo?
Indlela i-Nintendo 3DS egcina ngayo ngokumelene ne-DS
Iyini ifayela le-DYLIB?
Indlela Yokuthola Omkhulu Ukuthinta I-iPod touch
Ukuqinisekisa i-MD5 Checksum yefayela
I-Hard Disk Scrubber v3.4
Isofthiwe ye-Remote Scan
Indlela Yokwakha Uhlu Lomngani Lomndeni we-Facebook
5 Izindlela zokuthola i-HDTV kukhompyutha yakho
I-ATA efana ne-PTA (PATA)
Ama-Best Best Phones we-BlackBerry athola ngo-2018
Indlela Yokuthuthukisa Ikhompyutha Yakho ku-Windows Vista SP2